Moments Neshamwari 31
Zvinokwanisika here uye zvakakodzera kutarisa mune ramangwana uye kufanotaura zviitiko zvemugumo?
Izvo zvinogoneka asi hazviwanzo kurudyi kutarisa mune ramangwana. Kuti zvinogoneka zvinopupurirwa pamapeji akawanda enhoroondo. Nezve iko kuve iko kurudyi kunofanirwa kutemerwa nekusimba kwemunhu uye kutonga kwakanaka. Shamwari yaisazopa mumwe zano kuti ayedze kutarisa mune ramangwana. Mumwe anotarisa mune ramangwana haamiriri kudzidziswa. Anotarisa. Asi pane avo vanotarisa mune ramangwana, vashoma vanoziva zvavari kutarisa. Kana vakatarisa uye voona, inguva chete kana ramangwana razova iro rekare vanoziva izvo zvavakaona pavakatarisa. Kana munhu akaona mune ramangwana nechisikigo, hapana chakanyanya kukuvadza mukuenderera kwake kutarisa, asi vashoma vanokwanisa kuwana chero betsero kubva kuvhiya. Kukuvadza kunouya zvingaitike kubva mukufungidzira izvo zvinotaridzika zvaanofunga kuti anoona.
Kana munhu akatarisa kana kuona mune ramangwana anozviita nemanzwiro ake, kureva manzwisisiro ake echisimba; kana nehunyanzvi hwake, iko kuti, humambo hwepfungwa; uye hapana njodzi chaiyo pakuita izvi, chero iye asiri muyedzo wekuvhenganisa nyika umo iye anoona neenyika ino yenyama. Paanoedza kufanotaura zvichaitika mune ino nyika kubva pane izvo zvinoonekwa mune imwe nyika, anobva avhiringidzika; haakwanise kurondedzera zvaakawona uye ndokuzviisa munzvimbo yayo mune ramangwana munyika ino yepanyama; uye zvakadaro kunyangwe iye akaona zvechokwadi. Kufanotaura kwake hakugone kuvimbwa nako kana kuchishandiswa mune zviitiko zvemberi mune ino yepanyika nyika, nekuti izvi hazviitike sezvakafanotaurwa munguva, kana nenzira, kana munzvimbo. Iye anoona kana anoedza kuona mune ramangwana akafanana neucheche ari kuona kana kuedza kuona zvinhu pamusoro pazvo. Kana mwana achikwanisa kuona, zvinonyanya kufadzwa, asi zvinoita zvikanganiso zvakawanda mukunzwisisa kwake uye kutonga izvo zvaanoona. Iyo haigoni kukoshesa hukama kana kureba pakati pezvinhu. Kutama hakusipo kwemucheche. Ichaedza kubata chandelier nechivimbo chakawanda sekunge yakabata amai vayo mhino uye isinganzwisisi kuti sei isinga svike chandelier. Mumwe anotarisa mune ramangwana anoona zviitiko nezvishuvo zvave kuda kuitika, nekuti haana mutongo pamusoro pehukama pakati pezvaanoona zviri munyika mairi zvaanozviona, uye nezvenyama yepanyika, uye nekuti haakwanisi fungidzira nguva yepanyika yemukati mairi inogona kuitika maererano nechiitiko icho chaari kutsvaga. Fungidziro dzakawanda dzinoitika, asi kazhinji hadziwanzo kufanotaurwa. Hazvina kuchenjera, saka, kuti vanhu vavimbe nefungidziro dzevaya vanoedza kutarisa mune ramangwana vachishandisa clairvoyance kana mamwe manzwiro emukati, nekuti havakwanise kutaura kuti ndeipi yekufungidzira ichave yakarurama.
Avo avo vanovimba nekufungidzira kunouya kubva kune kunowanzodaidzwa kunzi "mukati ndege" kana "astral mwenje," vanorasikirwa nekodzero yavo yakakosha, ndiko kuti, kutonga kwavo. Nekuti, kunyangwe zvikanganiso zvakawanda izvo munhu zvaangaita mukuyedza kutonga zvinhu uye mamiriro ezvinhu pachezvake, iye achatonga zvakanaka chete nekudzidza, uye iye anodzidza nekutadza kwake; nepo, kana akadzidza kuvimba nekufungidzira kwevamwe, haazombove nekutonga kwakanaka. Mumwe anofanotaura zviitiko zvenguva yemberi haane chokwadi chekuuya kwavo kwechokwadi sezvakafanotaurwa, nekuti pfungwa kana hunyanzvi hwakafanotaurwa nekufanotaura hauna hukama nedzimwe pfungwa kana hunyanzvi. Saka munhu anoona chete kana anongonzwa chete, uye izvo zvisina kukwana, uye anoedza kufanotaura zvaakaona kana kunzwa, anogona kunge achirongeka mune dzimwe nzira, asi kuvhiringidza avo vanovimba nekufanotaura kwake. Nzira chete yechokwadi yekufanotaura zviitiko zvemberi ndeyekuti iye anofanotaura kuti ave nemafungiro kana masimba ake akadzidziswa zvinehungwaru; mune icho chiitiko chega chega kana hunyanzvi huchabatana nevamwe uye hwese huchazadzikiswa zvekuti hunogona kushandiswa nekunyatsoita senge iyo iyo murume anokwanisa kushandisa manzwi ake mukuita kwake uye nehukama hwepanyama.
Icho chinonyanya kukosha chikamu chemubvunzo ndeche: Ndizvozvo here? Mune mamiriro ezvinhu emunhu arizvino hazvina kunaka, nekuti kana munhu achikwanisa kushandisa pfungwa dzemukati nekuzvirondedzera kune zviitiko nemamiriro epasirese enyika, zvaizomupa mukana wakasarudzika pane vanhu vaanogara. Kushandiswa kwemanzwiro emukati kwaizogonesa murume kuwona izvo zvakaitwa nevamwe; Kuona kwacho kwaizounza zvimwe mhedzisiro sekukandirwa kwebhola mumhepo kwaizoguma nekudonha kwayo. Kana mumwe akaona bhora rakakandirwa uye akakwanisa kutevera parutivi rwokubhururuka kwaro, uye ane ruzivo, aigona kufungidzira chaizvo kuti raizowira kupi. Nekudaro, kana mumwe munhu aigona kushandisa pfungwa dzemukati kuona izvo zvakange zvatove zvaitwa mumusika wechitoro kana munharaunda yemagariro kana mune zvematunhu, aizoziva kushandisa mukana zvisirizvo kwezvakange zvakagadzirirwa kuve zvakavanzika, uye aigona zviito zvake kuti azvibatsire iye kana avo vaaifarira. Nenzira iyi aizove director kana mubati wezvinhu uye aigona kutora mukana nekudzora vamwe vaive vasina masimba senge ake. Naizvozvo, zvisati zvaitika kuti murume atarise mune ramangwana uye kufanotaura zviitiko zvemberi nenzira kwayo, anofanira kunge akunda kuchiva, kutsamwa, kuvenga uye udyire, kuchiva kwemanzwiro, uye anofanirwa kuve asina kukanganiswa nezvaanoona uye zvaano fungidzira. Anofanira kuve akasununguka kubva kune chero chishuwo chekuva nepfuma kana kuwana zvinhu zvepasirese.